उपसभामुखको शक्ति !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
उपसभामुखको शक्ति !
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नेकपाले न कारबाही गर्न सक्छ, न सांसदबाट हटाउन । संवैधानिक र कानुनी रुपमा उनी बलियो अवस्थामा छिन् । उनीमाथि दलको ह्वीप त लागू हुन सक्दैन नै, पदीय आचारणअनुकूल काम नगरेको अभियोगमा प्रस्ताव पेस गरिए त्यसलाई पारित गर्न पनि नेकपासँग दुई तिहाइ छैन ।
पुस २९, २०७६ राजेश मिश्र
काठमाडौँ — उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन वा थप कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उपसभामुख रहेकै कारण उनी दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर छिन् । भविष्यमा पार्टीको राजनीतिमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाहेक तत्काललाई उनले नचाहेसम्म उपसभामुख पद जाने सम्भावना छैन ।
नेकपाले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन उनले नमानेपछि उब्जिएको प्रश्न हो– पार्टीले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ ? सांसद पदबाट निकाल्न सक्छ ? कानुनले भन्छ– सक्दैन । उपसभामुख भएपछि दलको साधारण सदस्य पनि नरहेकी उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि सभामुख, उपसभामुखलाई कारबाही गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनका बेला आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मान्य रहने र त्यहाँ नाम रहेका व्यक्ति उक्त अवधिभर उम्मेदवार मानिन्छन् । बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम भने दलको सिफारिसमा आयोगले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सांसदमा निर्वाचित नभएका र बन्दसूचीमा उम्मेदवार कायम रहेका व्यक्तिलाई मात्र पार्टीले त्यहाँबाट हटाउन सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा समानुपातिकको बन्दसूची कायम रहने र दफा ६० मा समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगमा राजनीतिक दल र निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विषयसमेत हेर्दै आएका आयुक्त पौडेलले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट चुनिएका १ सय १० र प्रदेशसभाका ३ सय ३० जना निर्वाचित सांसद नै रहेकाले कानुनमा तिनलाई सहजै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने व्यवस्था नरहेको बताए ।
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले संसद्को कामकारबाहीमा दलीय प्रभाव नपरोस् भनेरै सभामुख र उपसभामुखले दलको सदस्यबाट राजीनामा दिने व्यवस्था रहेको बताए । ‘उहाँहरू दलको सदस्यता त्यागे पनि पार्टीको प्रभावबाट मुक्त भएको अवस्था रहँदैन, कारण हो राजनीतिक भविष्य,’ उनले भने, ‘पार्टीले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशनविपरीत पदमा रहेकै कारण तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको राजनीतिक हविगत त्यसपछि के भो ? सबैलाई थाहा छ ।’
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०७:०१